Mogadishu Journal » Xaad: “Lama aqbali karo Fowdada iyo qalalaasaha uu dalka gelinayo Farmaajo”
Nabadoon Max’ed Xasan Xaad oo ka tirsan Waxgaradka beelaha Muqdisho ayaa ka hadlay xaalada siyaasadeed ee dalku galay iyo talaabooyinka qalafsan ee uu qaaday Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday.
Xaad ayaa Farmaajo ku eedeeyey inuu dalka u horseedayo fowdo iyo dagaal aan la aqbali karin isagoo shaaciyey inay garab taagan yihiin Ra’iisul Wasaaraha xilgaarsiinta iyo qaabka uu doorashada u horlacayo.
“Haddii aan nahay waxgaradkii Muqdisho, xabad macno daro ah ma aqbaleyno natiijadeeda waa naqaan. waxaa ku baaqeyna anaga oo ah Odayaashii Hawiye in la joojiyo qalalaasaha socda” ayuu yiri Xaad
“Waxaan ka soo horjeednaa Fowdada Madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ha ka hor wareego doorashada oo caqabada ha ka qaado Waxaan garab taaganahay Raysal Wasaare Rooble.” ayuu intaa ku daray Xaad
Hadalka Xaad ayaa ku soo beegmay xili saacadihii la soo dhaafay ay cakirneyd xaalada Siyaasadeed ee dalka markii madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday uu ciidan dul dhigay xafiiska Ra’iisul Wasaaraha kadib shaqo joojintii sharci darada aheyd oo uu saaray inkastoo isku daygaas uu dhicisoobay.